မောင်သင် (ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
(မောင်သင် မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
(၁၉၂၁-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၅"။-၂၂)မေ ၂၂၊ ၁၉၂၁
မြင်းခြံခရိုင်၊ နွားထိုးကြီးမြို့နယ်၊ ထန်းခွရွာ
ဇူလိုင် ၁၇၊ ၁၉၉၃(၁၉၉၃-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၇"။-၁၇) (အသက် ၇၂)
ဆရာဝန်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ
ရွာသူကြီး ဦးငွေဇင်၊ ဒေါ်သီလ
မြန်မာ့ရုပ်ရှင် ထူးချွန်ဆု (၁၉၆၀)
မောင်သင် (၁၉၂၁–၁၉၉၃) သည် မြန်မာနိုင်ငံသား စာရေးဆရာ၊ ဆရာဝန်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားနှင့် ဒါရိုက်တာ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ မြင်းခြံခရိုင် နွားထိုးကြီးမြို့နယ် ထန်းခွရွာ၌ အဖ ရွာသူကြီး ဦးငွေဇင်၊ အမိ ဒေါ်သီလှ (ဒေါ်သီလ) တို့က ၁၉၂၁ ခု မေလ ၂၂ ရက် တနင်္ဂနွေ နေ့တွင် မွေးဖွား ခဲ့သည်။ ငယ်မည် 'မောင်သင်'၊ အမည်ရင်း 'မောင်မောင်သင်'၊ စာရေးဆရာ၊ ရုပ်ရှင် မင်းသား အဖြစ်တွင် ငယ်မည်ကို အသုံး ပြုခဲ့သည်။ မွေးချင်း ရှစ်ယောက်တွင် ဆဋ္ဌမမြောက် ဖြစ်သည်။
ထန်းခွရွာ မြန်မာ မူလတန်း ကျောင်းတွင် စတုတ္ထတန်း အောင်သည်ထိ လည်းကောင်း၊ ရေနံချောင်း အမျိုးသား အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ၄ တန်း၊ ၅ တန်း အောင်သည် အထိ လည်းကောင်း၊ မြင်းခြံ အစိုးရ အထက်တန်း ကျောင်းတွင် ၁ဝ တန်းထိ လည်းကောင်း ပညာ သင်ယူ ခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ်ကြီး အတွင်း ဆေးပညာရပ် များကို တပိုင်းတစ သင်ကြား ခဲ့ရသည်။ စစ်ပြီး ခေတ်တွင်မှ ဆရာဝန် စာမေးပွဲ အောင်မြင် ခဲ့သည်။ ရှေ့တန်း စစ်မျက်နှာသို့ အများဆုံး လိုက်ပါ အမှုထမ်း ခဲ့သည်။ ၄ နိုဝင်ဘာ ၁၉၅၈ တွင် အရပ် ဆရာဝန် ဘဝသို့ ပြောင်းခဲ့သည်။ စာပေ၊ ရုပ်ရှင်၊ ဆေးလောက နယ်ပယ်တွင် ကျင်လည် ခဲ့သည်။
မူလတန်း ကျောင်းသား ဘဝ ကပင် စာပေ၌ ဝါသနာ ပါခဲ့သည်။ ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် မဖြစ်မီ နဂါးနီ ဂျာနယ်ကျော် ပေါ်လာသော အခါတွင်ကား မောင်သင့် ကိုယ်တွေ့ ဆောင်းပါး၊ ဝတ္ထုများဖြင့် ထင်ရှား လာခဲ့သည်။ စစ်ပြီး ခေတ်တွင် သွေးသောက်၊ ရှုမဝ၊ မြဝတီ၊ ငွေတာရီ တို့တွင် ဆေးပညာ အခြေခံ ဝတ္ထုပေါင်း မြောက်မြားစွာ ရေးသား ခဲ့သည်။ ဆရာ့ ဇာတ်လမ်းစုံ [ငါးတွဲ] (၁၉၅၉ - ၁၉၇၁)၊ ချစ်သော အညို (အညို့ကို ဘယ်လို ပြောရပါ့ - ၁၉၆၉)၊ တင့်လှပေဟန်၊ အရိပ်ပမာ၊ မိုးမဲ၊ မိန်းမများကို လှစေသူ (၁၉၆၈)၊ အောင်အောင်မြင်မြင် (၁၉၇ဝ)၊ မြရည်နန္ဒာ (၁၉၇၁)၊ မိုးကိုမျှော်သည် (၁၉၇၁) တို့မှာ ထင်ရှားသည်။ ဆရာ့ ဇာတ်လမ်းစုံ အမှတ် ၁ ဖြင့် ၁၉၅၉ ခုနှစ် စာပေဗိမာန် ဝတ္ထု ပေါင်းချုပ်ဆု၊ ဆရာ့ ဇာတ်လမ်းစုံ အမှတ် ၅ ဖြင့် ၁၉၇၁ ခုနှစ် အမျိုးသား စာပေဆုတွင် ဝတ္ထုတို ပေါင်းချုပ်ဆုများ ရရှိ ခဲ့သည်။
စာရေးဆရာမောင်သင် သည် ၁၉၅၂ ခုနှစ်တွင် ဒေါ်ခင်သက်တင်နှင့် လက်ထပ်ခဲ့ပြီး သားသမီး ၅ ဦး ထွန်းကားခဲ့သည်။
ဆရာ့ဇာတ် လမ်းစုံ တွင် ပါဝင်သည့် ရေတိမ်နစ်ခြင်း ဝတ္ထုတိုကို ချစ်သွေး သစ္စာ အမည်ဖြင့် ရုပ်ရှင် ရိုက်ကူး ရာတွင် ကိုယ်တိုင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ရာမှ ရုပ်ရှင် လောက ထဲတွင် သရုပ်ဆောင် မင်းသား၊ ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ကျင်လည်ခဲ့ရတော့သည်။ ချစ်သွေး သစ္စာ၊ စိုးပါနဲ့မေရယ်၊ ရေမြေဆုံးတိုင်၊ တင့်လှပေဟန်၊ သူ၊ အတွေ့ စသည့် ဇာတ်ကား များစွာတွင် ပါဝင် သရုပ်ဆောင် ခဲ့သည်။ 'ပန်းပုသူဇာ ဇာတ်ကားကို ကိုယ်တိုင်ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ရိုက်ကူးခဲ့သည်။ "ချစ်သွေးသစ္စာ" ဇာတ်ကားဖြင့် ၁၉၆ဝ ပြည့်နှစ် အကောင်းဆုံး အမျိုးသား သရုပ်ဆောင် ရွှေစင်ရုပ်ဆုနှင့် ပြည်သူ တို့၏ သူရဿတီမယ်တော်ဆု တို့ကို တပြိုင်တည်း ရရှိခဲ့သည်။
၁၉၉၃ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၇ ရက်၊ အသက် ၇၃ နှစ်တွင် (သမီးလတ်ဒေါ်ညိုမီသင် နှင့် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဗိုလ်ကြီးကျော်ကျော်မိုး တို့ မိသားစုထံ အလည်အပတ်သွားရင်း) ရှမ်းပြည်နယ် ဖယ်ခုံမြို့ နေအိမ်၌ ကွယ်လွန် ခဲ့သည်။
↑ ရာပြည့် ဦးစိုးညွန့် (ဇူလိုင် ၂ဝဝ၅). ၂ဝ ရာစု မြန်မာ စာရေး ဆရာ ၁ဝဝ အတ္ထုပ္ပတ္တိ အကျုဉ်း။
↑ ဒဂုန်ရွှေမျှား. မြန်မာနိုင်ငံ စာပေဆုများ, စာ ၈၁ - ၈၂။
↑ (၁၉၇၁ - ၇၉) မြန်မာနိုင်ငံစာပေဆုများ, စာ ၅ - ၇။
↑ မောင်ကျော်သာ (၁၉၆၅)). တစေ့တစောင်း စာရေးဆရာတို့၏အကြောင်း, စာ ၉ဝ - ၁ဝ၈။
↑ မလိခ. မြန်မာစာပေ အဘိဓာန် (၂), စာ ၁၅ဝ။
↑ (၁၉၉၄) မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ်, စာ ၂၄၇ - ၂၄၈။
↑ မောင်သင် (အောက်တိုဘာ ၁၉၆၂). "ရုပ်ရှင် မရိုက်လိုပါ". ငွေတာရီ.
↑ "စာပေဆုနှင့် ရှုမဝ" (ဖေဖော်ဝါရီ ၁၉၆၁). ရှုမဝ. ရှုမဝ စာတည်းအဖွဲ့.
↑ "နာရေး ကြော်ငြာ" (၁၉ - ၇ - ၉၃). မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာ.
↑ မလိခ (နိုဝင်ဘာ ၁၉၈၅). "မြန်မာစာပေ အဘိဓာန်". မိုးဝေ.
↑ (1961) Who's who in Burma (Myanmar). People's Literature Committee and House, p. 176-177။
↑ မောင်သင်. လက်ရွေးစင် ဆရာ့ဇာတ်လမ်းစုံ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=မောင်သင်_(ရုပ်ရှင်သရုပ်ဆောင်)&oldid=416804" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၁ ဩဂုတ် ၂၀၁၈၊ ၀၅:၁၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။